कारभित्र भयो श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा, कारको छतमा चढेर बबाल गरिन् श्रीमती (भिडियो)
पाेखरा साउन ७- घटना चीनको हो।
तपाईंले अहिलेसम्म थुप्रै जोडीको झगडा देख्नुभएको होला, कहिले पार्कमा, कहिले घरमा वा कहिलेकाँही बाटोमै । तर के तपाईंले कहिले सडकको बीचमा गुडिरहेको गाडीभित्र कुनै जोडीको झगडा गरेकाे दख्नुभएको छ ? घटना चीनको हो जहाँ बीच सडकमा गाडीभित्र श्रीमान् श्रीमतीको झगडा हुन्छ । झगडा यति बढ्छ कि रिसाएकी श्रीमती कारको छतमा चढ्छिन् । यस्तो दृश्य करिब चार मिनेटसम्म चल्छ ।
वरिपरिका मानिसहरु हेरेको हेर्यै हुन्छन् र सोसल मिडियामा सिसिटिभी भिडियो निकै भाइरल हुन्छ । यो छोटो क्लिपमा महिला आफ्ना श्रीमानसँग बहसपछि कारमाथि चढ्छिन् । श्रीमान् उनलाई बचाउन वा मनाउन बाहिर आउँदिनन् । यो तमाशा देखेर पछाडिबाट आइरहेको गाडी साइडबाट निस्कन्छन् । रिपोर्टका अनुसार कार चलाइरहेका बेला नै श्रीमान्–श्रीमतीबीच बहस हुन्छ । श्रीमानले श्रीमतीलाई उपेक्षा गर्छन्, श्रीमती झन बढी रिसाएर कारकाे छतमा चढिन् ।
हरियो बत्ति हुञ्जेल श्रीमती यसरी नै कारमाथि बसिरहन्छिन् । केही बेरमा नै यो तमाशालाई स्थानीय पुलिसले देख्छन् र पुलिसले कारसहित दुबैलाई पुलिस स्टेशन बोलाउँछन् । पुलिसले लाइसेन्स बिना गाडी चलाएका कारण युवतीका श्रीमानलाई जरिवाना लगाउँछन् । यस्तै, श्रीमतीलाई चेतावनी दिएर छोडिन्छ । श्रीमती अबुझ भएका कारणले श्रीमानकाे बिजत र पैसा नष्ट भयाे ।
प्रकाशित मिति July 23, 2019
मास्क नलगाएको भन्दै सुपरमार्केटबाट निकाल्न खोजेपछि ‘भित्री वस्त्र’ खोलेर लगाइन् (भिडियो)
६० बर्षमा भुवनको जवानी- रियासँग ‘अघोषित प्रेम’ !
अष्ट्रेलियावासी नेपाली भन्छन्- ‘लिभिङ-टुगेदर’ गज्जब (भिडियोसहित)
‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ ड्रेसमा नम्रताको नयाँ लुक्स, हेराैँ १२ तस्विर
सार्वजनिक पार्कमा दर्जनाैँ मानिसका अगाडि याै नमा लि प्त जोडी समातिए (भिडियो)